ဂျူဒို-ကရာတေး-လက်ဝှေ့ သင်စရာမလိုပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂျူဒို-ကရာတေး-လက်ဝှေ့ သင်စရာမလိုပါ
Posted by myohtat on Dec 22, 2011 in Copy/Paste |9comments
ကျုပ်.. အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀လောက်က အထိုးအကြိတ်အရှောင်အတိမ်းတွေနဲ့
ကိုယ်လုံပညာ တွေကို သင်ကြားလိုက်စားခဲ့ဘူးပါတယ် …
ရိုးသားစွာဝန်ခံရရင် … ဒါတွေအားလုံးတတ်ထားမှ မိမိကိုယ်နဲ့ မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းကိုဘယ်သူမှ
အမှန်တကယ် .. ကျုပ်တို့လေ့လာသင့် တတ်ထားသင့်တာက(ဥပဒေ)ပညာပါဘဲ ..
လူဆိုတာ အသက်(၁၀၀)မနေရပေမဲ့ အမှု့(၁၀၀)တော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ် …
ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ မတရားတာတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ … တကယ်တမ်းကျတော့
ဂျူဒိုတွေ ကရာတေးတွေက အသုံးမ၀င်တော့ပါဘူး … ဥပဒေကသာအသုံးဝင်တာပါ ..
အဓိက လေ့လာထားသင့်တာက ရဲတွေနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဥပဒေပါဘဲ … ဥပဒေကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင် …
သူတို့ဘက်က သတိထားတတ်ပြီး ဥပဒေနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရမှာပါ …
ဥပမာအနေနဲ့ တစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ် .. သာမန်ဒဏ်ရာလောက်သာရတဲ့ ရိုက်မှု့တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုပါတော့ ..
ကိုယ့်ဘက်ကလူက တရားခံဆိုရင် ရဲကပုဒ်မ(၃၂၅)နဲ့ အမှု့ဖွင့်မှာပါ .. ဒီပုဒ်မကအာမခံပေးရမဲ့ပုဒ်မဆိုတာသိထားဘို့
လိုပါတယ် .. အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရှိသူနှစ်ယောက်ဆို အာမခံလုပ်လို့ရပါပြီ … အာမခံရရေးအတွက် ရဲကိုငွေပုံပေးစရာ
မလိုပါဘူး … အာမခံပေးလို့ရတဲ့အမှု့ဆို ပေးကိုပေးရမှာပါ … မပေးလို့ကိုမရဘူး … ပေးလို့မရတဲ့အမှု့ဆိုရင်တော့
ငွေတွေဘယ်လောက်ပေးပေး အာမခံပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး … နောက်တစ်ခုသိထားရမှာက ဘယ်ကိစ္စနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်
ရဲစခန်းကိုသွားခဲ့ပါက (သို့မဟုတ်)ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ဖုန်းဆက်ပါက … အဲဒီရဲစခန်းမှာရှိတဲ့ တာဝန်မှူးအမည်ကိုမှတ်
ထားဘို့လိုပါတယ် … ရဲတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး မကျေနပ်လို့တိုင်ချင်ရင်တော့ …
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရုံးအမှတ်(၈)နေပြည်တော်ပါ …
(၁)ရဲချုပ် (ရုံးဖုန်း) ၀၆၇-၄၁၂၀၆၆ (အိမ်)၀၆၇-၄၀၃၁၄၀
(၂)ဒုရဲချုပ် (ရုံး) ၀၆၇-၄၁၂၀၇၇ (အိမ်)၀၆၇-၄၀၃၁၄၁
(၄)ရဲမှူးချုပ် (ရုံး) ၀၆၇-၄၁၂၀၃၈ (အိမ်)၀၆၇-၄၀၃၁၄၂
(၅)တာဝန်မှူး – ၀၆၇-၄၁၂၀၀၅ ….
View all posts by myohtat →
ဖွံ့ ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေမှာ.. ဥပဒေပညာရှင်..ရှေ့နေတွေက… ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးတွေခမျ…။
လူထုနားလည်လွယ်အောင်.. ရှေ့နေတွေ.. အခမဲ့လိုက်ပေးရင်း.. စည်းရုံးအသိပေးသွားဖို့..လိုမယ်ထင်ပါကြောင်း…။
လောလောဆယ်တော့ အခမဲ့လိုက်တဲ့ရှေ့နေတွေ ထောင်ထဲမှာပဲရှိတယ်ထင်တယ်…
ရှေ့ နေ ထက် ရှေ့ နေမ က ပိုများနေတယ် ထင်တာဘဲ
တစ်ချို့ လေးတွေကြတော့ လဲ ကြည့်လို့ မဆိုးပါဘူး
မြန်မာပြည်လူထု အတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ကို မီးမောင်းထိုးပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်လေးစားပါတယ်… ကိုမျိုးထက်
အကျင့်ပျက် ခြစားနေတဲ့ အစိုးရယန္တရားကြီးဖြစ်လာရတာလဲ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အသိအမြင်နဲပြီး လာဘ်မထိုးသင့်တဲ့နေရာလဲထိုး ထိုးသင့်တဲ့နေရာလဲထိုးဖြစ်နေလို့ ထင်ပါတယ်…
အခြေခံဥပဒေကို လူတိုင်းနားလည်ပြီး… ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကလဲ အမှန်တစ်ကယ် အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့… အရေးပါတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခြေတစ်လှမ်းဖြစ်လာမှာပါ…
နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဥပဒေ ဆိုတာအလွန်အရေးပါ ပါတယ်
ဥပဒေတိုင်းကို ပြည်သူတွေ နားလည်သိရှိထား သင့်ပေမယ့်..လက်တွေ့မှာမလွယ်ကူပါဘူး
ဒါပေမယ့်..ပြည်သူနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ ၀န်ကြီးဌါနတွေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ
ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် များရှိ ရုံးတွေမှာ ရုံးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ချက်အရရောက်လာကြတဲ့
ပြည်သူတွေကို မိမိတို့ရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ပြဌါန်းထားတဲ့ဥပဒေ များကိုသိရှိလေ့လာနိုင်ဖို့
ခေတ်မှီနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့..မိမိသိဖို့လိုအပ်လာတဲ့ ရုံးရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို အင်တာ
ပြည်သူတွေ ရဲ့ ဥပဒေ နားမလည်မှုတွေကြောင့်သာ အချို့သောဝန်ထမ်းတွေမရိုးသားမှုကိုကျူးလွန်နိုင်ကြတာပါ
ဦးဦး ပြောသလို ဥပဒေ ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းအတွက် အရေးပါပါတယ်..။ လူတိုင်းလည်း နားလည်ထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်.. ။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ က ဥပဒေ ကို နားလည်းစရာမလို ဘူး ငွေရှိဖို့ပဲ လိုတယ် .. ငွေများတရားနိုင်ဆို တာ ဘယ်တုန်းက ပေါ်လာတဲ့ စကားပုံလည်း မသိဘူးနော်..:D
တကယ့်ကို ကျေးဇူးပဲ ကိုမျိုးထက်ရေ Rose လဲဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သွားပါတယ်။ တချိန်ချိန် လိုအပ်တဲ့အခါ အများကြီးအသုံးဝင်မှာပါ။ အားကိုးအားထားရာ တစ်ခုတွေ့တယ်လို့သဘောထားပါတယ်။ ဖုန်းတွေလဲ တကယ်အလုပ်လုပ်ပါစေလို့လဲ အများကြီး မျှော်လင့်ပါတယ်။ မန်းလေးက ရွာသူဖြစ် ရတာကိုလဲ ကျေနပ်မိပါတယ်။ သတင်းတွေ အကြောင်းရာတွေကို computer ရှေ့ထိုင်နေရင်း သိနေရလို့ပါ။
ဥပဒေပညာကို လူတိုင်းက မသင်ကြားနှိုင်သေးခင်
တကယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဥပဒေ ပညာရှင်များကလဲ ပြည်သူ တကယ်ကို အားကိုးရလောက်အောင် နေထိုင်သင့်တယ်
ပြည်သူဘက်က မားမားမတ်မတ် ရပ်သင့်တယ် ..
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာလဲ ဥပဒေပညာသင်ရတယ်ဗျ
ဒါပေမယ့် ရာဇ၀တ်ကြောင်း မဟုတ်ဘူး . international law ကို သင်ရတယ်..
ဒီတော့ကာ အခုလောလောဆယ် ဥပဒေ တက်နေတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာလဲ တကယ်အရေးကြီးတဲ့ ဘ၀အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ပညာရပ်များကို သင်ကြားနေတယ်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး စာမေးပွဲအောင်ရုံလောက်တင်သာမက တကယ်ကို နားလည်တတ်ကျွမ်းအောင် သင်ယူသင့်ပါတယ် …
ဒီနံပါတ်တွေ ကျနော့်အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တယ်
ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျို့…………….